IKHAYA LEHOLIDI E-RELLEU SPANISH VILLAGE! - I-Airbnb
IKHAYA LEHOLIDI E-RELLEU SPANISH VILLAGE!
Orxeta, Comunidad Valenciana, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Rob
Ikhaya leholide elinezitezi ezi-3 endaweni ehlala abantu basemadolobheni evaliwe enamachibi okubhukuda, ebangeni lokuhamba lesikhungo esingokomlando sendawo yaseSpain yaseRelleu. Indlu ifakwe ngokugcwele futhi ngokunethezeka, phakathi kwezinye izinto, isikrini esiyisicaba, i-TV yesathelayithi, i-WiFi, umshini wokuwasha izitsha kanye nomshini wokuwasha egumbini lezinsiza. Isiteshi sakwaVW Passat siyatholakala futhi njengemoto eqashisayo. Le ndawo ifanele imibhangqwana, abahamba bodwa, abahambi bebhizinisi, imindeni enezingane.
I-swimming pool kanye ne-sunbathing lawn epaki ifinyeleleka ngokukhululekile, amamitha angu-150 ukusuka emnyango kunesitolo esikhulu. Izindawo zokudlela zokuqala/amabha edolobhana emaphethelweni esikhungo somlando we-Relleu amamitha angu-500 ukusuka emnyango. Idolobhana elidala nalo linebhusha lendawo, indawo yokubhaka, isitolo sezinhlanzi kanye nekhemisi. Idolobhana eliyingqophamlando litholakala cishe ngemizuzu eyi-15 - 20 yokushayela ngenhla kweBenidorm namabhishi amaningana. Imoto eqashwayo iyatholakala endlini.
Endaweni sincoma i-Restaurant Balcon de Relleu enemenyu yezifundo ezingu-4 eshintsha nsuku zonke ehlanganisa iwayini elingu-€7.50 p.p. I-English Restaurant Bar de Lemontree eneFish namaChips njalo ngoLwesihlanu. Eduze kwakho uzothola iSafari Park Aitana kanye neBenidorm nazo zonke izindawo zayo ezinjengamabhishi, amapaki okuzijabulisa namapharadesi okubhukuda.
Asikho endlini noma eduze nendlu, kodwa sihlala sitholakala ngocingo ukuze sithole usizo. Umgcini wethu obalulekile kanye/noma i-concierge nabo bayatholakala kumakhasimende ethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Orxeta namaphethelo